Apple Music inotiratidza iyo tirera yeiyo yakanyorwa Bhendi! Iyo Bert Berns Nhau | Ndinobva mac
Apple Music inotiratidza iyo tirera yeiyo yakanyorwa Bhendi! Iyo Bert Berns Nhau
Apple yakatozvitaura payakapa yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi. Apple Music yaisazove imwe yekushambadzira mimhanzi sevhisi, asi Apple yaida kuti iitwe chirevo chinoteverwa nemamwe maindasitiri anosanganisira mavhidhiyo akasarudzika, pamwe neakasarudzika akateedzana, kunyangwe izvi zvisina kubudirira zvaidiwa naApple, kubvira ese ari maviri Planet Yezve Mapurogiramu uye Carpool Karaoke vakagamuchira kushoropodzwa kwakakomba kubva kune vezvenhau vane hunyanzvi.
Kuenderera mberi nemusoro wenyaya wezvinyorwa, Apple yakatumira pane yayo YouTube peji pfupiso yechinyorwa chinotevera chatinogona kuona muna Gumiguru 24, iro zuva richawanikwa kune vese Apple Music vanyori. Tiri kutaura nezveBand! Iyo Bert Berns Nhau, gwaro iro, sezita raro rinoratidzira, rinobata nezve hupenyu hwaBert Berns, mumwe wevagadziri vemimhanzi nguva dzese.
Iro zita rinogona kunge risinganzwika sechinhu kwauri, asi kana tikataura nezvehuwandu senge maBeatles, zvinhu zvinoshanduka, nekuti imwe yeakanyanya kurova echikwata cheBritish "Twist and Shout" yakanyorwa uye yakagadzirwa naBert. Iye anozivikanwa zvakare seyemugadziri wemahanzi makuru senge "Brown Eyed Vasikana", "Pano Anouya Husiku", "Chidimbu cheMoyo Wangu" ...
Basa raBert semugadziri rakatanga kuAtlantic Records, uko yakashanda pamwe neBeatles neRolling Stones. Gare gare akazove chikamu cheBANG Rekodhi uye Shout Rekodhi, kwaaive achitarisira kuburitsa maalbham eNeil Diamond, maMcCoys neStrangeloves.
Ichi chinyorwa chinotiratidza basa raBerns, pamwe nemukadzi wake Carmine Wassel, maneja wake uye shamwari yepamwoyo, hukama nemhomho Tommy Eboly, aimbova mukuru weGenovese yeNew York. Chii chimwe zvakare zvehukama naVan Morrison, Paul McCartney, Solomon Burke, Keith Richards ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music inotiratidza iyo tirera yeiyo yakanyorwa Bhendi! Iyo Bert Berns Nhau
watchOS 4.1 uye tvOS 11.1 zvakare vane yavo yechipiri beta yevagadziri
Kana iwe uri wakashushikana wema80s, gadzirisa neiyi sleeve yeMacBook yako